Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba Eziphambili zaseThailand » Iintlungu zokutshixwa kweThailand kufuneka ziyeke, amashishini akhala
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Ukwakha kwakhona • Safety • Iindaba Eziphambili zaseThailand • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
Idilesi ye-PM i-Thailand lockdowns
Iziko laseThailand loLawulo lweMeko ye-COVID-19 linciphise ukulawulwa kwezifo ngoLwesithathu, nge-1 kaSeptemba, 2021, yokutshixwa kweThailand.
Okwangoku i-Thailand lockdowns ibandakanya i-9 pm ukuya kwi-4 am ixesha lokubuya ekhaya kumaphondo "abomvu mnyama".
Amashishini aseThai afuna ukuba ukuyeka ngokukhawuleza kuphele kwaye ukuhanjiswa kwesitofu kwenziwe ngokufanelekileyo.
Amashishini ebesoloko evaleleke ngaphezulu kwenyanga kwaye aphumeze amanyathelo angqongqo olawulo lwezifo kwiinzame zokuphepha ukuvalwa kwexesha elizayo.
Inkulumbuso yase-Thailand u-Prayut Chan-o-cha uthe i-9: 00 pm ukuya kwi-4: 00 am curfew kwi-29 COVID-19 Amaphondo "abomvu mnyama", kubandakanya iPattaya City kunye neBangkok, zinokuthi zifutshane okanye ziphakanyiswe, kuxhomekeke kwimeko ye-COVID-19.
Uthe nangona iZiko loLawulo lweMeko ye-COVID-19 linciphise ezinye zezifo ngoLwesithathu, uyathemba ukuba wonke umntu uya kuhlala ethe ntsho. Izithintelo zinokukhululeka ngakumbi ukuba imeko iyaphucuka.
Inkulumbuso ithe iyazi ukuba ixesha lokufika ekhaya lichaphazela amaziko olonwabo, kwaye imibutho emele abanini bazo kwiindawo zentselo, kwiindawo zentselo, nakwezinye iindawo zasebusuku zifuna ukuxoxa ngokususwa kwezithintelo ezingakumbi kwiCCSA, kodwa uhlala exhalabile ngabantu abangena kule ndawo.
Amashishini aseThai afuna ukuba kutshixwe kumiswe kwangoko
Amashishini amaninzi ayenethemba emva kosuku lokuqala lokuvula kwakhona ngoLwesithathu, kulandela ngaphezulu kwenyanga yokuvalwa ngamanyathelo okutshixa. Amashishini amaninzi aphumeza amanyathelo angqongqo olawulo lwezifo ukuthintela okunye ukuvaleka kwixa elizayo, ngelixa ikomiti edibeneyo icele urhulumente ukuba angaphindi abhengeze ngokungabikho kwezinto.
IKomidi eliHlanganisiweyo lokuSebenza lezoRhwebo, uShishino kunye neBhanki (i-JSCCIB) icele urhulumente ukuba angaze aphinde aphumeze amanyathelo okutshixa njengempendulo ye-COVID-19, kodwa endaweni yoko ajolise ngakumbi ekusasazeni ngokuchanekileyo izitofu kunye nonxibelelwano olucacileyo noluntu ngokubanzi.
Usihlalo weJSCCIB, uPayong Srivanich, uthe amanyathelo okutshixa asetyenzisiweyo ngaphezulu kwenyanga khange akhokelele ekwehleni okukhulu kwinani entsha COVID-19 cAces, kodwa endaweni yoko kubangele ukonakala okuqhubekayo kuqoqosho.
Kwangokunjalo, uMongameli weFederal of Thai Industries (FTI), uSuphan Mongkolsuthee, wathi urhulumente akufuneki aphinde aqalise amanyathelo okutshixiza, esithi inqanaba lokugonywa kufuneka lifikelele kwi-70% yabemi, ukuba urhulumente uyakwazi ukufezekisa ukukhutshwa kwayo. ekujoliswe kuko.
Uninzi lweevenkile ezinkulu ebezishiywe ngabantu ngexesha lokutshixwa kwazo, zibuyele ebomini izolo, njengoko iivenkile ezininzi kunye neeresityu zivunyelwe ukuba ziphinde zivulwe.
Kwiziko le-MBK eBangkok, abathengisi abaninzi bazivulile iivenkile zabo kusetyenziswa amanyathelo angqongqo ezempilo nokhuseleko. Inkundla yokutya apho sele ikulungele ngokupheleleyo ukusebenza ngenkoliso yabasebenzi abagonywe ngokupheleleyo. IZiko le-MBK, elikwabizwa ngokuba yiMahboonkrong, yindawo enkulu yokuthenga ezivenkileni ezinemigangatho eli-9 eBangkok eneevenkile ezingama-2,000 XNUMX, iivenkile zokutyela kunye neendawo zokuthengisa iinkonzo.